पूर्व सांसदका छोरा १४ दिनदेखि काठमाडौंबाट बेपत्ता ! | Ratopati
पूर्व सांसदका छोरा १४ दिनदेखि काठमाडौंबाट बेपत्ता !
personराजेश भण्डारी exploreकाठमाडौं access_timeचैत १, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौं– पूर्व सांसद अफिलाल ओखेडाको छोरा सागर शर्मा (ओखेडा) विगत १४ दिनदेखि बेपत्ता छन् । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित रत्नराज्य स्कुलबाट १६ वर्षीय सागर फेला नपरेको भन्दै पूर्व सांसद ओखेडा दिनहुँजसो महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र अपराध महाशाखामा धाइरहेका छन् । तर, प्रहरीले उनको छोरा कता हराए भन्नेबारे पत्ता लगाउन सकेको छैन ।